आरोप अस्वीकार गर्दै अदालतमा हाजिर भएका चौधरीको बयान पछि बहस सुरु
धनगढी – जिल्ला अदालत, कैलालीमा उपस्थित भएका टीकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीको बयान सकिएको छ । अहिले बहस सुरु भएको छ । लामो समयदेखि फरार रहेको चौधरी सोमबार आफैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको इजलासमा चौधरीले बयान दिएका छन् ।
अहिले बादी प्रतिवादीका वकिलको बहस सुरु भएको छ । चौधरीको तर्फबाट मिलनकुमार राई, गंगा उपाध्यायसहित तीन वकिलले बहस गर्नेछन् । कैलाली १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका चौधरीमाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दा लगाइएको छ । गत २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा एक बालक र एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो । घटनाको मुख्य योजनाकार चौधरी भएको दाबी गर्दै मुद्दा परेपछि उनी फरार रहेका थिए । चौधरीले भने आरोप अस्वीकार गर्दै अदालतमा हाजिर भएका छन् ।
प्रकाशित : सोमबार, फागुन १४, २०७४१६:३९
अवैधरुपमा विदेश गएका नेपाली महिलाहरुलाई सचेतको गराउनु पर्ने के थियो त खास कारण (पुरा जान्नुहोस)
हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएका ६ जनाको शव आज काठमाडौ ल्याइँदै !
हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका पर्यटनमन्त्री अधिकारीले संसारबाटै लिए बिदा !
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा सीमा नाकाको निरीक्षण
प्रधानमन्त्रीलाई मोदीले गरे नेपालीमै स्वागत, भने यस्तो
उपत्यकाबाट १७ मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन !
विभिन्न माग राख्दै आजदेखि कैदीहरुले शुरु गरे आमरण अनशन !